Mogadishu Journal » Qaramada Midoobey oo ka hadashay dagaalka gobolka Sool
Qaramada Midoobey oo ka hadashay dagaalka gobolka Sool
Mjournal :-Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday degaanka Tukaraq oo ay isku heystaan ciidan ka kala tirsan maamulada Somaliland iyo Puntland.
Shalay oo ugu dambeysay waxaa dagaal uu dhexmaray ciidanka Somaliland iyo Puntland, wuxuuna dagaalkaas geystay khasaare kala duwan oo labada dhinac soo gaaray, maadaama uu socday ilaa gelinkii dambe.
Qaramada Midoobay waxay labada maamul ku boorineysaa inay wada hadal yeeshaan, ayna muhiim tahay in ay gaaraan heshiis xabad joojin iyo mid siyaasadeed, ka Hay’ad ahaan mar walba waxaan taageernaa nabadda, colaada waxaa ka dhasha in la waayo dad shacab ah oo aan waxba galabsan.” Ayuu yiri Micheal Keating.
Danjiraha QM ee Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo kan Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ka dalbaday inay si deg deg ah khilaafkooda ugu raadiyaan xal nabadeed, si loo badbaadiyo dad badan.
Wadamada Caalamul Islaam oo war ka soo saaray in berri ay tahay Ramadaan
Wararkii ugu danbeeyay xaalada deegaanka Tuka-Raq ee gobolka Sool